I-Araliya Suite - I-Airbnb
Nugegoda, Western Province, i-Sri Lanka
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Einstein
Inefenisha, ikamelo elilodwa (A/C) I-Annex enendawo yokungena ehlukile yesikhathi esifushane emaphethelweni e-Colombo -kitchenette enompheki ophekela ababili, i-Micro Wave Oven, i-Rice Cooker, i-Mini Refrigerator,. Igumbi lokugezela elinamanzi ashisayo. I-Cable TV enamashaneli wamazwe ngamazwe, indawo yokupaka evikelekile.(i-wifi YAMAHHALA,Ugesi namanzi )
Indawo yangakini enokuthula emizuzwini embalwa ukusuka e-Japura Hospital, amathrekhi okugijima & iPhalamende. Izitolo ezinkulu ezidumile, izitolo ezinkulu nezitolo zokudlela ezidumile eziseduze
Ikamelo elinethezekile eliklanywe kahle elinombhede omkhulu weNdlovukazi ne-TV yesikrini eneziteshi zamazwe ngamazwe ne-WiFi yamahhala. Izibani eziseceleni & indawo encane yokuhlala ngaphandle izibani zengadi zengeza ubukhazikhazi ekamelweni lombhede. Ikhishi elincane elinakho konke negumbi lokugezela lesimanje elinamanzi ashisayo. Izithuthi zomphakathi, i-Tuk Tuk Park ukuhamba ngemizuzu engu-2, i-Uber/pickme iyatholakala
Imindeni ehlonishwayo yesigaba esiphakathi eqashwe ezindaweni ezizungeze amadolobha amakhulu ihlala endaweni eseduze. Ngaphandle nje kugcwele izinto eziluhlaza namanzi okwenza indawo enhle yedolobhana ngaphansi kwedolobha
Akukho okuthintwayo okungena nokuphuma & izindlela zokukhokha ezikhona njengezinyathelo zokuphepha ezengeziwe.
Iseluleko seziphathimandla sezempilo sisetshenziselwe ukuphepha kwabo bonke abathintekayo
Umbungazi uyatholakala endaweni eseduze nganoma yiluphi usizo olwengeziwe
Iseluleko seziphathimandla sezempilo sisetshenziselwe ukuphepha…
Hlola ezinye izinketho ezise- Nugegoda namaphethelo